आनन्ददायी यौनसम्पर्क गर्ने डाक्टरको सल्लाह - Baikalpikkhabar
आनन्ददायी यौनसम्पर्क गर्ने डाक्टरको सल्लाह
–ज. उत्तेजना कसरी हुन्छ ?
१. तपाईंको हकमा लागू नभए पनि पहिलो पटक यौनसम्पर्क राख्ने वा यौनसम्पर्कको कम अनुभव भएका व्यक्तिलाई महिला यौनाङ्ग क्षेत्रको संरचनाका बारेमा पर्याप्त ज्ञान नहुनु एउटा कारकका रूपमा देखिएको छ । पहिलो त कतिपयलाई त्यहाँ तीनवटा द्वार हुन्छन् भन्ने सम्म थाहा नभएको पाइन्छ । अर्का्तिर योनिको संरचना पछिल्तिर र माथितिर एक कोणको दिशामा अवस्थित हुन्छ । द्वार नमिल्दा वा मिले पनि लिंगको कोण नमिल्दा गाह्रो भएको पाइन्छ, तर तपाईंको विवाह भएको नै यति समय भैसकेको र नियमित यौनसम्पर्कमा रहेकाले यो कुरा सान्दर्भिक नहोला ।
२. तनाव स् सामान्यतस् योनिको मांसपेशी लचिलो हुन्छ, विशेष गरेर महिलामा यौनसम्पर्क गर्दा दुख्छ भन्ने लागे वा तनावपूर्ण स्थिति भए योनिको मांसपेशी बेस्सरी खुम्चन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा योनिमा लिंग त के त्योभन्दा सानो गोलाई भएको कुरा पनि प्रवेश गराउन समेत कठिन हुन्छ ।
३. सुख्खा हुनु स् सामान्यतस् योनि रसिलो हुन्छ । यौन उत्तेजनाको स्थितिमा त प्रशस्त रस आउँछ । योनि सुख्खा भएका बेला लिंग प्रवेश गराउन गाह्रो हुन्छ र यौनसम्पर्क पीडायुक्त समेत हुन्छ । त्यस क्रममा योनि र लिंग दुख्ने, पोल्ने आदि हुन्छ । तपाईले लामो समय यौनसम्पर्क राख्दा लिंगमा घाउ हुन्छ भनेको कुरा यसैसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । तपाईंले नलेखे पनि त्यस क्रममा तपाईंकी श्रीमतीलाई समेत निकै पीडा भएको हुनुपर्छ ।
केही स्थितिमा महिलाको योनिको बाहिरतिरको भागमा विशेष संकुचन आउँछ, जसलाई ख्बनष्लष्कmगक​ भनिन्छ । यो विशेष गरेर मानसिक कारणले हुन्छ । यस्तो स्थितिमा लिंग योनिमा प्रवेश गराउन असम्भवजस्तै हुन्छ ।
तपाईं तथा तपाईंकी श्रीमतीलाई माथीका सम्भावित कारणहरूका बारेमा राम्रोसँग जानकारी हुने भएकाले त्यसको विश्लेषण गरी समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ । महिला यौनाङ्गको संरचनाको राम्रो अवलोकन गरेर मात्र लिंगलाई योनिद्वारमा प्रवेश गराउनुपर्छ । योनि सुख्खा भए चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ । कुनै संक्रमण भए वा संचरचनागत खराबी भए चिकित्सकको सहयोगमा उपचार गराउनुपर्छ । ख्बनष्लष्कmगक को कारण मानसिक भएकाले मनोचिकित्सकको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस क्रममा मुख्य रूपमा लिंग पर्याप्त रूपमा उत्तेजित हुनुपर्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
बुधबार, २५ पुष, २०७५, दिउँसोको ०२:०६ बजे